N'onwe Gị handicrafts | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya N'onwe Gị handicrafts
Ụlọ ọrụ nlekọta ụlọ camellia
Camellia bụ osisi na-eto eto nke Tea. Osisi osisi kachasị ama bụ Camellia sinensis, a na-eme tii site na ya. Otutu camellia achọtawo ihe n'ile ugbo. Ị ma? A na - akpọkwa Camellia ndị Japan bilitere. Ụlọ dị n'ime ụlọ camellia Camellia bụ ndò na-ejide osisi ma ọ bụ shrub, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na okooko osisi kpuchie ya.
Esi esi na lagenarii mee efere na ihe ncheta
Lagenaria bụ osisi a ma ama nke ezinụlọ ugbo, nke a na-akọ na mbara igwe na ebe okpomọkụ. India, Africa na Central Asia ka a na-ewere ebe a mụrụ ebe Lagenaria. Ugu a bu mmadu mara kemgbe oge ochie. N'ihi eziokwu ahụ bụ na e ji ugu mee ihe maka imepụta efere, ọ natara aha nke abụọ ya - efere efere.
Esi mee ka swans si na taya: otu klas onye ọ bụla na-ese foto
Ọtụtụ ndị nwe ụgbọ ala n'ime ụgbọala taya na-agbaze ụgbọala - na-atụba ha ma ọ bụ ịdị umengwụ, ma ọ bụ otu ugboro, ma ọ bụ na ha kpachara anya nọgide na-enwe ọ bụrụ na ha na-abịa na mberede. A na-ejikarị taya na-emepụta ala, akwa akwa akwa mma, egwuregwu na ogige ma ọ bụ mepụta ihe ịchọ mma mbụ maka ubi na ogige.
Otu esi eji icho nnunu
Ugbu a, ọ dị ezigbo mfe ịzụta ma ọ bụ mee ka nnụnụ na-azụ onwe gị site na ihe ndị na-ekpuchi. Na nke na ọ naghị ele anya na-agwụ ike, ị nwere ike icho ya na ihe dị iche iche achọ mma. Ụmụaka nwere mmasị na usoro a, n'ihi na ebe a, ha nwere ike igosi ihe ha chepụtara. Ka anyị tụlee ihe ndị nwere ike ichota feeder, na ihe ka mma ịghara iji.
Kedu esi eme ka onye na-ere nri na-arụ n'ụlọ
A na-eri nri dị iche iche nke ọtụtụ ụdị anụ ugbo, ịzụta nri abụghị ọnụ ala. N'ebe a, ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-ahọrọ ịkwadebe ngwakọta nke onwe ha, ka iji nweta ego zuru ezu, ha na-ahọrọ nkeji ụlọ maka ịzụta ígwè ọrụ mmepụta ihe. Kedu otu esi eme granulator, ghọta ihe a n'isiokwu a.
Esi ghara imebi ifuru: ịzụlite gloxinia ma lekọta ya
Ihe nzuzo nke ivy room na-elekọta n'ụlọ: foto na ndụmọdụ gardeners
Esi akpọ aha ịnyịnya: aha nickname aha